COVID-19 Na dia mahatsiravina aza, ny fotoanan'ny krizy nandritra ny taona maro dia namporisika ihany koa ny sasany amin'ireo zava-baovao malaza mbola ampiasaina ankehitriny. Avy amin'ny fiara mpamonjy voina noforonina nandritra ny vanim-potoana antenantenany hanampiana ireo mpitsabo tonga haingana sy hitaterana ireo marary haingana, handefasana kasety mandritra ny Ady Lehibe Faharoa manampy ny miaramila hanamboatra fitaovana ...
Ireo mpanamboatra lasitra dia mifantoka amin'ny fitadiavana ny taranaka manaraka
Tahaka ireo fikambanam-barotra indostrialy maro dia maro, ny Fikambanana mpamokatra bobongolo China dia nanangana tetikasa kendrena hisintona ny tanora ihany koa. Androany, ny fandraisana mpiasa ho an'ny mpiasa manaraka dia nanjary laharam-pahamehana ho an'ireo mpanamboatra sinoa. Fantatro fa toa ...
Ny gel silika an-tsokosoko dia nohafohezina ho LSR, izay vokatra azo tian'ny mpanjifa sy ny mpanamboatra azy. Ny gel silicaika ranoka dia vita amin'ny vokatra gel silika. Izy io dia manana elastika tsara, tsy tantera-drano ary fanoherana ny hamandoana, ary mahatohitra asidra, alkaly ary akora simika hafa. Amin'ny ankapobeny ianao ...
Ny fianarana ny fizotran'ny famolavolana plastika dia mety ho mavesatra kely amin'ny voalohany. Ny orinasanao dia nandritra ny herinandro, volana na angamba taona maro nanaovana fikarohana sy fampandrosoana mba hamolavolana ny vokatra vaovao, manavao sy mahomby indrindra. Manomboka mandavaka lalindalina kokoa ianao ary mandamina ny fomba wi ...
Misafidy ireo fitaovana mety ho an'ny singa plastika ve ianao?
Ny fisafidianana ny fitaovana mety ho an'ny karazana vokatra dia zava-dehibe mba hampitomboana ny fiasa sy ny tombom-barotra. Aza mieritreritra fotsiny hoe inona no atao hoe vokatra farany. Hamarino tsara fa tokony ho fantatrao ny momba ny fomba hampiasana ilay singa sy ny zavatra hifandraisany ...